Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Sirdoonka Wayaanaha oo Soosaaray Bayaan Lagu Qoslay.
Deg Deg: Sirdoonka Wayaanaha oo Soosaaray Bayaan Lagu Qoslay.
Hay’ada sirdoonka wayaanaha oo sanadihii lasoo dhaafay kujirtay jahawareer xoogan ayaa si lama filaan ah u soo saartay go’aan lagu qoslay oo aan waxba kabadali doonin arimaha cakiran ee wadanka Itoobiya.
Hay’ada sirdoonka wayaanaha oo bayaan aan nuxudh badan lahayn soo saartay ayaa sheegtay in aan la ogolaan doonin wax banaan baxyo ah oo kadhaca guud ahaan wadanka Itoobiya gaar ahaan Gobolada Axmaarada iyo Oromada.
Sida bayaanka kamuuqata hay’ada sirdoonka wayaanaha ayaa ladaalaa dhacaysa culaysyo siyaasadeed iyadoo kuguul daraysatay gabi ahaanba shaqooyinkii loo igmaday, wuxuuna bayaanku umuuqdaa mid aan laga fiirsanin farsamo ahaan iyo nidaam ahaan toona.
Hadalka ay soosaartay hay’ada fashilantay ee sirdoonka wayaanaha ayaa gabi ahaanba kasoo horjeeda tastuurka xukuumada wayaanaha, waxayna hay’ada sirdoonku isasiisay awoodii baarlamaanka oo ah midka kaliya ee soosaari kara go’aamada noocaas ah.
Dhinaca kale kacdoon wadayaasha kasoo horjeeda xukuumada wayaanaha ayaa dhankooda sheegay in aysan joojin doonin kacdoonada iyo dibad baxyada ay xaqooa ku baadi goobayaan, waxayna kacdoon wadayaashu sheegeen in hanjabaad iyo gacan qaad toona aysan kuhakan doonin.
Kooxda TPLF ayaa wajahaysa kacdoono gudaha ah iyo qalalaase siyaasadeed, waxayna kooxdu siwayn ugu fashilantay daminta kacdoonada iyo latacaalida siyaasada arimaha dibada.